जेठ २२, २०७५| प्रकाशित १८:०८
तपाईँका स्कुल पढ्ने केटाकेटी छन् र तिनीहरु निजी स्कुलमा पढ्छन् भने पक्कै तपाईँको सोमबारको बिहान सुखद भएन। अरु अभिभावक जस्तै आफ्ना नानीलाई स्कुल पठाउने तयारी गरिरहँदा स्कुलले पठाएको सूचना तपाईंको मोबाइलमा बजेको हुनुपर्छ, जसमा 'टार्न नसकिने कुनै समस्याका कारण आज विद्यालय बन्द रहने' भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो।
कतिपयले पाएको सूचनामा 'शैक्षिक हडतालका कारण' भन्दै विद्यालय बन्द हुने जनाउ दिइएको हुनुपर्छ। अथवा कतिले फेसबुकमा रहेको बच्चाको स्कुलको एकाउन्टबाट यस्तो सूचना पाउनुभयो होला। यति सूचना पाएपछि तपाईंलाई कस्तो अनुभव भयो होला? म अलिअलि अनुमान गर्न सक्छु।
मिडियामा आएको समाचार पत्याउने हो भने ८ वटा विभिन्न दलसम्बद्ध आफूलाई प्रतिपक्षी बताउने विद्यार्थी संगठनहरुले बन्द गराएका हुन् रे। ती संगठनका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका विज्ञप्तिका प्रतिलिपि पनि केही मिडियाले छापेका छन्। तीमध्ये कतिपय संगठनका नाममा 'क्रान्तिकारी' शब्द समेत जोडिएका छन्, जसले गर्दा पनि हामीलाई बन्द उनीहरुले नै गराएका हुन् भन्ने लाग्न सक्छ। हुन पनि विगतमा पनि यस्तै-यस्तै नाम जोडिएका संगठनहरुले पर्चा बाँडेकै भरमा अनेकखाले बन्दहरु भएकै हुन्। यसैले पनि हामीलाई त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर, समय धेरै फेरिइसक्यो र एक दशकअघिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा ठूलो भिन्नता आइसक्यो।
अभिभावकहरुको अर्को समस्या के भने, आफ्नो जायजेथा जे-जति भए पनि सन्तानको भविष्य भने सदृढ होस् भन्ने चाहन्छन्। निजी विद्यालयहरुको अर्को शक्ति यही हो, जसमाथि खेल्दै शुल्क वृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यताको नाटक उनीहरु पनि गर्छन् र त्यस्तो नाटकलाई संस्थागत गर्न निजी विद्यालयहरुका केही देशव्यापी छाता संगठन पनि खुलेका छन्।
अरु त अरु, सरकारले समेत यी विद्यालयहरुलाई आफूले भनेको बेला खोल्न र बन्द गराउन सक्दैन। अब उप्रान्त त्यसो गर्न सक्यो भने अर्को कुरा, तर अहिलेसम्म सरकारले यस्तो गर्न सकेको छैन। यसको अर्थ के भने, यी विद्यालयहरुको तालाचाबी पूर्णत: विद्यालयकै हातमा छ वा त्यसको 'मास्टर की' यस्ता निजी विद्यालयहरुका छाता संगठनहरुको हातमा पनि छ।
बरु स्कुलहरुले त त्यसरी आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनहरुसँग दोहोरी खेलिरहेका हुँदा हुन्। सम्भवत: स्कुलहरुले भन्दा हुन्, 'तिमीहरु आन्दोलन गरेजस्तो गर, हामी स्कुल बन्द गर्छौं। हाम्रो महिनाको एक दिनको खर्च बच्छ। त्यही खर्च तिमीहरुलाई दिउँला। तिमीहरुको आन्दोलन पनि पास, हाम्रो एक वर्षको नाफा पनि पास।'
झट्ट सुन्दा कपोलकल्पित लाञ्छना जस्तो लाग्ला। यो लेख पढ्ने कोही स्कुल सञ्चालक हुनुहुन्छ भने त झन् 'के भद्दा मजाक गरेको' भन्दै गाली गर्दै हुनुहोला। तर, वर्षदिन पढाउने जिम्मा लिएर प्रस्ट कारण नखुलाई गैरजिम्मेवार तरिकाले पटकपटक विद्यालय बन्द गरेर त्यसको पनि शुल्क असुल्नु अभिभावक र विद्यार्थीमाथिको झनै भद्दा मजाक भएन र? नत्र यसअघि भएका आन्दोलन वा हडतालका बेला भएका बन्दपछि के सहमति भए भन्नेबारे अभिभावकहरुलाई औपचारिक रुपमा विद्यालयहरुले जानकारी दिएका छन् त? आफ्नो सरोकार भएका विषयमा अभिभावकलाई जानकारी दिनु विद्यालयहरु वा तिनका संगठनहरुको जिम्मेवारी होइन? त्यस्तो थाहा पाउनु अभिभावकको अधिकार होइन?
त्यस्ता राजनीतिक वा अन्य अभीष्ट भएका संगठनहरुले 'शैक्षिक हडताल' भनिदिँदैमा विद्यालयहरु बन्द नहुनुपर्ने हो। तर, बन्द भइरहेका छन्। हामीलाई लाग्छ, बन्द उनीहरुकै कारण मात्रै भइरहेको छ। तर, माथि उल्लेख गरिएका ३ वटा पक्षभित्रको एउटा पक्ष अभिभावक हो।
यही प्रश्न सोध्दा एकजना जानेबुझेका मित्रले भने, 'अभिभावकले त के गर्न सक्छन् र? बिचरा निमुखा अभिभावक!' अब बन्दका लागि जिम्मेवार ३ पक्षमध्येको मुख्य जिम्मेवारको कुरा गरौं।